Inter Milan oo qaadanaysa Luciano Spalletti (Goorma ayaa lagu wadaa saxiixa?) – Gool FM
Inter Milan oo qaadanaysa Luciano Spalletti (Goorma ayaa lagu wadaa saxiixa?)
Raage May 22, 2017
ROME, ITALY - AUGUST 27: AS Roma coach Luciano Spalletti attends a press conference at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on August 27, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)
(Milano) 22 Maajo 2017 – Luciano Spalletti ayaa lagusoo warramayaa inuu haatan kusoo baxay dookha 1-aad ee Inter Milan, iyadoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo todobaad-dhamaadkan.
Macallinkan oo uu qandaraaskiisa Roma dhamaanayo xagaagan ayaa lasoo werinayaa inuu durba kooxdiisa Giallorossi u sheegay inuusan sii joogaynin.
Warsidaha La Repubblica ayaa haatan werinaya inuu dhacay kulan 3 saacadood qaatay oo maanta dhexmaray Walter Sabatini, Steven Zhang iyo Piero Ausilio kaasoo ay maamulka Beneamata ku guddoonsadeen in Spalletti uu yahay dookhooda 1-aad.
Kooxda Nerazzurri ayaa doonaysa macallin Talyaani ah oo yaqaanna Serie A, waxayna haatan u muuqdaan kuwo kasii quusanaya macallinka Chelsea ee Antonio Conte.
Waxaa sidaa darteed la sheegayaa inay calmadeen Spalletti horraanta todobaad-dhamaadkan ama horraanta todobaadka soo aaddan.
ROME, ITALY – AUGUST 27: AS Roma coach Luciano Spalletti attends a press conference at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on August 27, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)
RASMI: Juventus oo si rasmi ah ula wareegtey Juan Cuadrado
“Messi ayaa markale u qalma Ballon d’Or laakiin haddii uu qaadi waayo waxaa u qalma....” Pique